Who were Bengali, so called Rohingya?: သို့ ...... ကိုမြအေး (၈၈ -ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်)
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကိုမြအေးကို ပြောပေးပါ။ ခင်ဗျာသမီး တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားနေတယ်လို့။ ကိုမြအေးကို ကျနော်က နိုင်ငံရေးသမားတယောက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက် ဘ၀မှာ ပေးဆပ်နိုင်မှုထဲက တကယ်လူထုအတွက် စွန်လွတ် အနစ်နာခံတဲ့ သူမို့လို့ လေးစားပါတယ်။ သူသမီး ဝေနှင်းပွင့်သူကိုလည်း လေးစားမိခဲ့တယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ရှေ့မှာ စကားပြောသွားတဲ့နေကဆိုရင် အို.. ကိုယ်တို့ မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကို ဒီလောက်အသက်အရွယ်ကလေးနဲ့ လုပ်နိုင်ပါလားလို့ လေးစာမိတယ်။ အခုက စင်ပေါ်ကို တင်ခါစပဲ ရှိသေးတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိသေးတဲ့ လူမျိုးတမျိုးကို လူမျိုးစုစာရင်းသွင်းပြီးတော့ နယ်မြေဖဲ့ပေးမဲ့ ကိစ္စမှာ သူပါဝင်နေတယ်။ အဲဒါကြောင်း ကိုမြအေးခင်ဗျာ.. အစ်ကို ထောင်ထဲမှာ ရှိတုန်းက နိုင်ငံရေးနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်လို့ ဒီကိစ္စကို မသိရှိခဲ့ဘူးဆိုရင့်တောင်မှာ အခုတော့ သိသင့်ပါပြီးခင်ဗျာ။ အဲဒါကြောင်း သားသမီးမကောင်းရင် မိဘခေါင်းဆိုသလို့ အစ်ကိုရဲ့သမီးကို သမိုင်းစာအုပ်တွေပေးဖတ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးကို သိဖို့ လမ်းညွှန်ပေးဖို့ အစ်ကို ကို ညီအစ်ကိုပမာ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမဟုတ်ရင် ဒီကလေးမဟာ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်ကို ရောက်လာဖို့ သိပ်မလွယ်ရပါဘူး။ ပြည်သူလူထုတွေက ဒီကလေးမကို ဒေါ်စု လက်သစ်၊ ဒေါ်စု စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လို့ ချီးမွမ်းခန့်တွေ ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုက ဘာမသိ ညာမသိဘဲနဲ့ စင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ သွားအော်တာ ရေသန့်ဘူးတွေ၊ ကြံပိုင်းတွေ၊ ဂေးတွေနဲ့ အပေါက်ခံရတာပဲ အဖတ်တင်ပါတ်။ ဒါကြောင်းမို့ ကလေးမို့မှားတာကို ကျနော်တို့ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် နောက်ကို ဒီလို့ ဆက်မမှားဖို့ အစ်ကိုတို့က ကိုယ်သားသမီးကို အသိပေးသင့်ပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီကလေးမတော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် လမ်းလျှော်မှာကို ကျနော်တို့လည်း မလိုချင်ပါဘူး။ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဟာ မြန်မာသမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှလည်း မရှိခဲ့သလို့၊ အခုလည်းမရှိပါဘူး။ အိမ်နီးနားချင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဒုက္ခရောက်လာတဲ့သူတွေကို ကျနော်တို့က ကြင်နာတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ လူသားချင်းစာနာလို့ နေရာပေးထားတာကို အဂုက နေရာလုလာနေတဲ့ အကောင်တွေပါ။ လူသားချင်တော့ စာနာပါတယ်။ ဒါပေမယ် တိုင်းရင်းသားပေးရအောင် လူမျိုးနွယ်စုသတ်မှတ်ရလောက်အောင်ထိတော့ မလွယ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ မြန်မာသမိုင်းတလျှောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာပါလို့ အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်တုန်းကလည်း မရှိခဲ့သလို၊ ဂျပန်ကို တော်လှန်တုန်းကလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခု ဒီမိုကရေးစီကို သွားတိုက်အခါလည်း ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မတွေ့ရပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်မှာ အလစ်ဝင်ပြီးတော့ နေရာလုနေတဲ့ အကောင်တွေသာမြင်ပါတယ်။ တောမီးလောင်းတော့ တော်ကြောင် လက်ခမောင်းတီတဲ့သဘောပါ။ ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒီနေရာမှာ ဘာသာရေးကို စော်ကားမဟုတ်ဘူး။ သူယုံကြည်ချက်နဲ့ သူ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အခုက လူမျိုးရေး အချောင်းသမားတွေကို ပြောပြနေတာပါ။ ဒါကြောင်းအစ်ကိုသမီး ဝေနှင်းပွင့်သုံကို ဒီအချက်တွေကို ထောက်ပြပြီးတော့ သွန်းသင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အစ်ကို မျက်နှာကို ငဲ့ကွက်ပြီးတော့ ဒီထက်ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေကို ကျနော်တို့ မပြုလုပ်ချင်ပါ။ ကလေးမက ငယ်သေးတယ်ဆိုပေမယ် မြွေးပွေးလိုပါပဲ။ အကြီးကိုက်ရင်လည်း သေးတယ်၊ အငယ်ကိုက်ရင်လည်း သေတာပဲ။ ဒါကြောင်းအစ်ကိုအနေဲ့ ဆုံးမပေးဖို့ မိတ္တာရပ်ခံတာပါ။
မြန်မာ မျိုးချစ် လူငယ် တယောက်
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 5:14 PM
For ...... ကိုမြအေး (၈၈ -ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်)
ခွေးလိုးမသား ကုလားလိမ် မင်းပေးတဲ့ဗွီဒီယိုက
ခွေးက ကုလားမကို ဆော်နေတဲ့ ကားပါလားကွ
အဲဒါ ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းလား မင်းတို့မှန်ရင် အစိုး
ရနဲ့ သတင်းထောက်တွေနဲ့ တရားဝင်စိန်ခေါ်
တင်လိုက်လေ တခြားပြောစရာမလိုဘူး မင်းတို့
ကို ၀က်နဲ့ နပမ်းလုံးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး
မင်းတို့မှန်လို့ ရဲရင်တင်ပြလိုက် လိမ်လို့တော့မ
ရဘူး ရခိုင်တွေ ဗမာတွေက စာမတတ် စာမဖတ်
တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး လူ့အခွင့်ရေးကိုပြောချင်လား မင်းတို့ဘုရားကို
ps. ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတဲ့ လီးကုလား
Anti-Fake Rohingya said...
Soe Myint said...
ဟေ့ ဘင်္ဂလာကုလား လူလိမ် ဒီလောက်တောင် နိုင်ငံလိုချင်ရင် ပြည်ပကနေ လိပ်ခေါင်းထွက်အောင် အော်မယ့်အစား ပြည်တွင်းမှာလာတောင်းပါလား။ နိုင်ငံတော့မရဘူး အင်စိန်းထောင်က သီးသန့် အခန်းတစ်ခန်းပေးလိုက်မယ်။
ကုလားဆိုအားလုံး အမိကိုလို ကုလားဆိုအားလုံးလိုးပါသည်
ဒီလောက် မိုက်ရိုင်းတဲ့ မူဆလင်တွေရဲ့ comment တွေ ကို ဘာလို့ ခွင့်ပြုထားရတာလဲ။ Admin ရေ ကြည့်ကျက်လုပ်အုန်း။ ဒီဆိုက်ဒ် ဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ discussion လုပ်တဲ့ နေရာ ကနေ မွတ်ဆလင်တွေ ဆဲချင်တိုင်း ဆဲနေကြတဲ့ နေရာဖြစ်တော့မယ်။ သတင်းတွေ ကြည့်ဖို့ လာတာ။ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုး၊ ကိုယ့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ၊ ကိုယ့်လူမျိုး ၊ ကိုယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မွတ်ဆလင် တွေ ဆဲချင်တိုင်းဆဲတာ ကို ဖတ်ဖို့ လာတာ မဟုတ်ဘူး။
comment moderation ခံသင့်ပါတယ်။
ဒီတိုင်းတပါးသားရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ရခိုင်ပြည်နယ်ကစပြီး ၀ါးမျိုခြေကုတ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ တိုင်းရင်းသား အလိမ်တွေ ရဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ဒီမိုကရေစီ အရေး လုပ်ရှားနေကြချိန် မှာ ကုလားဥာဏ်သုံးပီး အခါအခွင့်ကောင်းယူ လူအခွင့်အရေးကို ဗန်းပြပီး အာရပ်ကမ္ဘာက ငွေကြေးသြဇာ အထောက်အပံ နဲ့မူဆလင်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာလို့ မြင်တယ် ကျွန်မတို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေက ဒီ ရိုဟင်ဂျာ နာမည်ခံ ဘင်္ဂလီကုလားတွေ ဟာ တိုင်းတပါးသားတွေလို့ ပဲမြင်တယ် ဒီအရေးဟာ တချိန်ချိန်မှာ ရခိုင်သူ/သားတွေရဲ့အရေး သာမက မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့ အရေး ပါ ဖြစ်လာမှာ သေချာတယ် ဆို တာ သိသာထင်ရှားနေတယ် မြန်မာပြည်သူသားတွေ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဒီမို ကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ဒီ ဘင်္ဂလီကုလားတွေ က ယုတ်မာပက်စက်သော အကြံ အစည်ဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဆို သော လူသူမကြားဖူး မူဆလင်အချင်းချင်းတောင် မကြားမသိဖူးသော ဟာသပျက်လုံးသဖွယ် သမိုင်း အလိမ်တွေ ဖန်တီးဖော်ထုတ်ပီး မူဆလင်နိုင်ငံသစ် ထူထောင်ဖို့ ကြံစည်နေတာကို ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမအားလုံး လက်တွဲ ညီညီတိုက်ထုတ်ရမယ် တိုင်းတပါးသားဘင်္ဂလီကုလားရန်ဟာ ရခိုင်ပြည်သူတွေ အတွက် သာမက မြန်မာပြည်သူ/သားတိုင်းအတွက် တာဝန်ရှိတယ် အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် ဒီဘင်္ဂလီ ကုလားတွေ ဟာ ကရင်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ် တို့ မှာ လည်း မသိမသာ တော်တော် လေ ခြေကုတ် ယူ ထားတာ တွေ့ ရတာ ဒါကြောင့် ဒီ ရို ဟင်ဂျာ( မရှိသော တိုင်းရင်းသား နာမည် ကဘယ် လို ခေါ်ခေါ် အရေးမကြီးပါဘူး) ဘင်္ဂလီကုလား အရေး ဟာ တိုင်းတပါးသားဘင်္ဂလီကုလား တွေရဲ့ကုလား ဥာဏ် ဆိုး ဥာဏ် ယုတ်သုံးပီးဝါးမျို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိူးစားနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် ။အိမ်ရှင်မျက်နှာ အားမနာ အိမ်ငှားက စော်ကားဆိုသလို ပေါ့ရှင် သနားလို့ အိမ်မှာခဏနေ ခွင့်ရတာကို အားမနာ အိမ်ကို မောင်ပိုင်စီးချင်တာတော့ အံ့ပါရဲ့ ရှင်
so rude, all of you. how do you all beaBurmese citizens? ashamed of you all. Burmese respects each other
ကိုမြအေး ကိုတိုင်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးပါဘဲ... ဟိုးဘိုးဘွားစဉ်ဆက် ထဲက ရန်ကုန်ကို ရောက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ နွယ်ဖွားပါ.. ဒါကြောင့် သူ့သမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန်က သူတို့အမျိုးသားရေးကို သူလုပ်နေတာပါ... ကိုမြအေး ရိုဟင်ဂျာနွယ်ဖွား ဆိုတာ တကယ် မသိကြတာလား... တိုင်းပြည်အတွက် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ကို လေးစား နိုင်ပေမယ့် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ လူမျိုးက ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်း မဟုတ်တာကြီးကို ဟုတ်သယောင်ယောင် လုပ်ပီး အခွင့်အရေး ယူချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ ရှုံချပါတယ်... အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်...။။
အစ်ဆလမ် ဘာသာကိုးကွယ် တဲ. ကုလားဖြစ်ဖြစ် ဘမာအစစ် ကနေ ဘာသာပြောင်းတာဖြစ်ဖြစ် စောက်မျိုးယုတ် ကြတာပါပဲ နိုင်ငံတကာမှာ လဲ မျက်နှာသာ မပေးကြတော.ဘူး လူ.အခွင်.ေ၇း စကားလာမပြောနဲ. ပြောတဲ.မအေလိုး ဒို.နိုင်ငံမှာ မနေနဲ.ကိုမြအေး ကိုလေးစားတယ် ဒါပေမဲ. ဇာတ်မ၇ှုပ်နဲ.ကွန်မြူနစ် တွေလိုဘယ်သူ.ကိုမ အကျိုးမပြု လို.ကတော.အပိုပဲ ဒို.လူမျိုးစ၇ိုက်နဲ.လိုက်ဖက်ပြိး မျှတ တဲ.စနစ်ပဲလိုတယ် လူ.အခွင်.အေ၇း၇ှိတဲ. နိုင်ငံမှာလဲ islam ကိုနှိမ်ထား၇တာပဲ တကယ်လို. လိုအပ်လာ၇င် ကာကွယ်ေ၇း အတွက်လုပ်အားပေး ၇ဲဘော် လုပ်မယ် မျက်ကန်းမျိုးချစ် လို.ပြောပြော ဒိမအေလိုးတွေ လူပါးဝလွန်းလာပြိ ဥိးမြအေး သမိး သတိ ထားနေဖို.လိုပြိ ပြန်လာလို.ကတော.အ၀တ်ဖြူ ထုပ် ဖြစ်တော.မယ် ငါတို.တိုင်၇င်းသားလူမျိုးတွေက လွဲ၇င်နှိပ်ကွပ်နေ၇မှာပဲ ဘာလူ.အခွင်.အေ၇းလဲ လိးပဲ၇မယ်ဟေ. ဒိလိုပြောနေလို.လခစား မထင်နဲ. မန်းလေး မင်းနေပြည် အစစ်က ဟေ.